Oge satịlaịtị iri abụọ na asatọ nke Apple Park | Esi m mac
Oge 18 satịlaịtị satịlaịtị nke Apple Park
Anyị na-ahụkarị ọtụtụ vidiyo ndị drones nke Apple Park dere na akụrụngwa ya na ugbu a, ọ bụrụ na oge site na mbara igwe nwere ike ọ gaghị adị ka ọ ga-ahụ ọganihu nke ọrụ ndị ahụ n'ụzọ zuru ezu, mana ọ na-ahapụ akara na ọ na-achọsi ike ịhụ ọganihu. site n’afọ 2015 gara aga rue ugbua.
Anyị enweghị ụbọchị doro anya maka njedebe nke ọrụ, mana ihe doro anya bụ na Apple chọrọ ka Apple Park a bụrụ nke zuru oke na maka nke a, enwere ike ghara ịtọ ụbọchị mmecha nke ọrụ, ee, ọ ga-amagbu onwe ya ma ya mechaa Septemba na inwe ike ịhụ ngosi nke ọhụrụ 10 ncheta iPhone na Steve Jobs Mgbakọ, ma nke a bụ adịghị anya site ugbu a ala nke ebe mgbakọ.
Ọ bụ eziokwu na Apple kwuru na kemgbe Eprel ha enweworị ndị ọrụ na-arụ ọrụ na akụrụngwa ahụ, mana n'ọfịs dị n'akụkụ mgbanaka etiti, na akụkụ ndị ọzọ nke ogige ahụ enweghị ọrụ Apple. N'ọnọdụ ọ bụla, ebe anyị na-ahapụ vidiyo a nke naanị 18 sekọnd nke ị nwere ike ịhụ ọganihu nke iwu Apple Park na ihe oyiyi satịlaịtị:
Ọ dị egwu ịhụ mmalite nke Apple Park ruo mgbe Mee 20Ugbu a, ọ dịtụkwuo elu ma karịa ihe niile ọ nwere ọhụhụ na mpụga nke mgbanaka ahụ. Gịnị bụ anya ka anyị na-ahụ larịị nke esịtidem nkọwa bụ na e nweghị ọsọ imecha ma ọ bụrụ na ha nwere na-ewetara afọ a iphone na mpụga ebe ha ga-enweghị nsogbu. Ọ ga-adị mma ịhụ isi okwu ahụ echere ogologo oge na ụlọ ọrụ Steve Jobs, mana ọ bụrụ na ọ bụghị 100% agwụla anyị nwere obi abụọ na ha ga-ebupụta ya n'agbanyeghị na nke a na Apple ị maghị, maka ugbu a, anyị na-enwe ọ generalụ izugbe nke Apple Park. nke ahụ ga-abụ ebe etiti anya niile ma emechaa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Oge 18 satịlaịtị satịlaịtị nke Apple Park
Ọtụtụ puku ndebiri ahaziri iche maka Peeji, Nọmba na Isi Okwu